- Page 88 of 314 - NEWS & MEDIA
လူသားတွေအတွက် ကူညီ အကျိုးပြုတဲ့ တိရစ္ဆာန်များ
လူသားတွေအတွက် ကူညီ အကျိုးပြုတဲ့ တိရစ္ဆာန်များ လူသားတွေနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေဆိုတာဟာ ရှေးယခင်တည်းက အချင်းချင်း မှီခိုအားထားကြရတဲ့ ဆက်ဆံမှုမျိုးဖြစ်ပြီး အခုလို နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ် တိုင်အောင်လည်း တိရစ္ဆာန်တွေဟာ လူသားတွေအတွက် ကူညီအကျိုးပြုနေဆဲပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ လူသားတွေအတွက် ကူညီ အကျိုးပြုကြတဲ့ တိရစ္ဆာန်များအကြောင်း ဧရာဝတီ စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက် ဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) မြွေ အန္တရာယ်အရှိဆုံး တိရစ္ဆာန်တမျိုးဖြစ်တဲ့ မြွေဟာ လူသားတွေအတွက် အကျိုးပြုကူညီပေးနေတယ်ဆိုတာကတော့ အံ့အားသင့်စရာပါပဲ။ မြွေရဲ့အဆိပ်ဟာ မြွေဆိပ်ဖြေဆေးအဖြစ် ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အသုံးပြုကြသလို နောက်ဆုံး လေ့လာစမ်းသပ်ချက်တွေအရဆိုရင် မြွေရဲ့အဆိပ်မှာ ပါဝင်တဲ့ cytotoxic ဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို သေစေနိုင်တာကြောင့် အနာဂတ်မှာ ကင်ဆာရောဂါအတွက် …
မိခင်ကို ပြစ်မှား၍ ကျိန်စာသင့်ပြီး လူနှင့်ပစ္စည်းများ ကျောက်ခဲဖြစ်သွားတဲ့ (ဖြစ်ရပ်မှန်)
မိခင်ကို ပြစ်မှား၍ ကျိန်စာသင့်ပြီး လူနှင့်ပစ္စည်းများ ကျောက်ခဲဖြစ်သွားတဲ့ (ဖြစ်ရပ်မှန်) အင်ဒိုနီးရှားမှာ မွေးသမိခင်ကို စော်ကားပြစ်မှား၍ ကျိန်စာသင့်ပြီး လူကော သင်္ဘောကော ပစ္စည်းများအပါအဝင် ကျောက်ခဲဖြစ်သွားခဲ့ (ဖြစ်ရပ်မှန်)ဒီအဖြစ်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ကျော်ကဖြစ်ရပ်လို့ သိရပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆူမားတြားကျွန်းအနောက်ဘက်က Padang ဆိပ်ကမ်းနဲ့သိပ်မဝေးတဲ့နေရာမှာ ခုထိရှိနေဦးမယ့် လေ့လာစရာနေရာတစ်ခုပါ။ ဒီလူနာမည်ကိုတော့ Marlin Kundang လိုသိရပါတယ်။Kundang ကိုဘယ်မှာမွေးဖွားတယ်ဆိုတာတော့အတိအကျမသိပေမယ့်၊ငယ်စဉ်တည်းက မိခင်နဲ့သားအမိ နှစ်ယောက်သာရှိခဲ့ပါတယ်၊ ဖခင်ဆုံးပါးပြီးနောက်မှာ လူမမယ် kundang ကို မိခင်က ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက် လာခဲ့ရပါတယ်။ မိခင် က ခေါင်းရွက်ဗျက်ထိုး ဈေးရောင်းတဲ့အခါ အရပ်တကာလှည့်ရင်း kundang ကို လက်ဆွဲခေါ်သွားရပါတယ်။ဖတဆိုးသားကို ချစ်လွန်းလို့ မဆူရက်မပြောရက်နဲ့။ ဒီလိုနဲ့ kundang …
ငါးဖမ်းသွားရင်း ရရှိခဲ့တဲ့ အရာတစ်ခုကြောင့် ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့ မိသားစု
ငါးဖမ်းသွားရင်း ရရှိခဲ့တဲ့ အရာတစ်ခုကြောင့် ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့ မိသားစု ဒီအဖြစ်အပျက်လေးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းက တရုတ်နိုင်ငံ Chengdu Sichuan ဆိုတဲ့ရွာလေးမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုရွာလေးမှာ Luong ဆိုတဲ့ မိသားစုတစ်စု နေထိုင်ပြီး တစ်နေ့ ငါးဖမ်းသွားရင်း Ganoderma lucidum လို့ခေါ်တဲ့ လင်ဇီးမှိုမျိုးစိတ် တစ်မျိုးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါမှိုဟာ အလွန်ရှားပါးပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆေးဘက်ဝင်မှိုတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ခေတ်က တရုတ်ပြည်ကို တည်ထောင်တဲ့ ပထမဦးဆုံး ဧကရာဇ်မင်း Qin Shihuang လက်ထက်မှာတောင် ထာဝရရှင်သန်နိုင်ဖို့ ထိုဆေးဖက်ဝင်မှိုကို ရှာဖွေခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဆေးကျမ်းစာတွေထဲမှာ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါ့အပြင်နာမည်ကျော် တရုတ်သမားတော်ကြီး Ly Thoi Tran ရဲ့ Ban …
သမီး သိခဲ့ပါပြီ အဖေ (သုံးမိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်)….
သမီး သိခဲ့ပါပြီ အဖေ (သုံးမိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်)…. အဖေဖြစ်သူကကျောင်းကို လာပါတယ် ။ကူလီသမားတစ်ယောက် မို့ အဖေအဝတ်စားတွေမှာမီးသွေးတွေ ပေကျံ့နေတာပေါ့ … ဆရာမဖြစ်သူက ဟေမန်လေးကို ” သမီး ဟိုမှာ . . ကျောင်းမှာ ရှေ့မှာ မတ်တပ်ရောက်စောင့် နေတာ ။ သမီးရဲ့ အဖေမှတ်လား . . ” ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ တကယ်ပဲ အဖေဖြစ်နေသည် … ” ဟုတ်ပါတယ် ဆရာမ သမီးအဖေပါ ”ဘေးနားက သူငယ်ချင်းတွေက ဝိုင်းပြီး ” ဟဲ့ ဟေမန် အဖေကလည်း ကြည့်ပါအုံး ညစ်ပတ်နေလိုက်တာ . . ”” အေးလေ …
ဘုရားနဲ့ နီးချင်ရင် လိုက်နာကျင့်သုံးရမဲ့ အရည်အသွေး ( ၉) မျိုး ….
ဘုရားနဲ့ နီးချင်ရင် လိုက်နာကျင့်သုံးရမဲ့ အရည်အသွေး ( ၉) မျိုး …. (၁) အဘိဇ္ဈာ ကင်းရမယ် ။ (၂) စွဲလမ်းစိတ် ကင်းရမယ်။ (၃) အမျက်ဒေါသ ကင်းရမယ် ။ (၄) အဖျက်စိတ်ထား ကင်းရမယ် ။ (၅) သတိရှိရမယ် ။ (၆) အသိဥာဏ်ရှိရမယ် ။ (၇) သမာဓိ ရှိရမယ် ။ (ဂ) စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှု ရှိရမယ် ။ (၉) ဣနြေ္ဒစောင့်စည်းမှု ရှိရမယ် ။ ( သင်္ဃာဋိကဏ္ဏသုတ္တန် ) (၁) အဘိဇ္ဈာကင်းရမယ် သူတပါးရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုကို မတော်မတရား မလိုချင်ရဘူး …
သူ့ရဲ့ကစား သမားဘဝတုန်းက ဖာဂူဆန်ဆီကနေ သင်ယူခဲ့တဲ့နည်းပြ ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်လည်းဖွင့်ဟခဲ့သည့် ဂစ်
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် သူ့ရဲ့ကစား သမားဘဝတုန်းက ဖာဂူဆန်ဆီကနေ သင်ယူခဲ့တဲ့နည်းပြ ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်လည်းဖွင့်ဟခဲ့သည့် ဂစ် ” ကျွန်တော် ဝေးလ်လက်ရွေးစင်နည်းပြဖြစ်ခဲ့တုန်းက သူက ကျွန်တော့်ကို Congratulations လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူက တော့ ကျွန်တော် ရဲ့အတက်ပိုင်းဖြစ်စေ အကျပိုင်းဖြစ်စေ ဘယ် ရာမဆိုခေါင်းအေးအေးနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ မှားကြားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အကြံဥာဏ်တစ်ချို့ကိုလည်းပေးခဲ့သေးတယ်။ ကျွန်တော်သူနဲ့ အလုပ်တွေ စတင်လုပ်ကတည်းက ထူးခြား တဲ့အရာတွေနဲ့ပဲပြည့်နက်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကလက်ရှိမှာတော့ ဖာဂူဆန်လို အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတ တွေလိုတော့အပြည့်အဝမရှိသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ အချိန်တိုင်းမှာတော့ သူက ကျွန်တော့်ကိုကူညီပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ကို နည်းဗျူ ဟာအပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဘာမှ မပြောပြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လမ်းညွှန်မှုတွေကိုပဲ သင်ပြတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ …
ဒဏ်ရာကြောင့် ဘောလုံးကစားဖို့ရုန်းကန်နေရပေမယ့် ဆိုးလ်ရှားရဲ့ယုံကြည် မှုကိုရထားဆဲပင်ဖြစ်ကြောင်း ဖိုဆူမန်ဆာပြောကြား
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ဒဏ်ရာကြောင့် ဘောလုံးကစားဖို့ရုန်းကန်နေရပေမယ့် ဆိုးလ်ရှားရဲ့ယုံကြည် မှုကိုရထားဆဲပင်ဖြစ်ကြောင်း ဖိုဆူမန်ဆာပြောကြား ” ကျွန်တော်ဟာအသက်ငယ်သေးတာမို့ ယူနိုက်တက် အသင်းမှာပဲဆက်ရှိချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အသက်(19) နှစ် အရွယ်ကတည်းက နယ်သာလန် အသင်းအတွက် ပွဲထွက် ခွင့်ရအောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အခုကျွန်တော်ရထားတဲ့ ဒဏ်ရာဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ကစားသမားဘဝ ထိုးနက်နေတာ ကိုကျွန်တော်သိပါတယ်။ ဒဏ်ရာက အဲ့လောက်အထိပြင်း ထန်နေမယ်လို့ကျွန်တော်မတွေးထားဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်က ကလပ်အသင်းမှာ ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်တွေရဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ နောက်တော့ ကလပ်အသင်းနဲ့ အတူ ဆုဖလားများစွာကိုလည်းကိုင်မြောက်ချင်ပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော့်ရဲ့ပန်းတိုင်လို့လည်းဆိုလို့ရပါတယ်။ ယူနိုက်တက်မှာ ကစားနေတဲ့သူတစ်ယောက်အတွက်ကတော့ ဒါဟာပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ ဆိုးလ်ရှားက ကျွန်တော့်အပေါ်အကောင်းတစ်အားမြင်ပါ တယ်။ ကျွန်တော် အလုပ်တွေကိုအပြင်းအထန်လုပ်နေတာ ကိုသူမြင်တယ်။ ကျွန်တော် သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့တိုင်း သူကျွန်တော့်ကို အားပေးချီးကျူးစကားတွေကိုအရမ်းပြောပါ တယ်။ …
‘ရောဂါမှန်သမျှ အပူကြောင့်ဖြစ်တာ အစွမ်းထက်တဲ့ သဘာဝဆေးနည်း’
‘ရောဂါမှန်သမျှ အပူကြောင့်ဖြစ်တာ အစွမ်းထက်တဲ့ သဘာဝဆေးနည်း’ မြန်​မာအိမ်​တိုင်းမှာ သင်္ကြန်​​ရောက်​ရင်​မအိုး​သေး​သေး​လေး​တွေ ဝယ်​ကြတယ်​​ကျမ ကအဲဒီ​ မြေအိုး ​သေး​သေး​လေးထဲက်ို​ရေ မပြည့်​တပြည့်​ထည့်​ပြီးမကျည်းသီး လက်​တဆုပ်​ခန့်​ထန်းလျက်​ အလုံး​သေး​သေး​လေး​တွေ၁၅လုံးခန့်​ဆား ဇွန်း​သေး​သေး တစ်​ဇွန်းခန့်​အဲဒီ ၃မျိုးကို ဒီအတိုင်းထည့်​ထားလိုက်​တယ်​မ​မွှေနဲ့ ​မွှေစရာမလိုဘူး​မွှေရင်​ အဖတ်​မှုန်​​​တွေထလာလိမ့်​မယ်​ တစ်​ချက်​မှမ​မွှေဘဲ သူ့ဘာသာကြည်​တက်​လာတဲ့ အရည်​ကြည်​ကို​ရေမ​သောက်​ဘဲ ​ရေအစားထိုးပြီး​သောက်​တယ်​​သောက်​ရင်​ ဘာအကျိုးဖြစ်​မလဲဆိုအရင်​ စဉ်းစားကြည့်​ရ​အောင်​မကျည်းသီးကို ​ကြေးဘုရား​ကြေးခွက်ေ​​တွ အညှိတွေတက်​​နေတာ​တွေကိုပွတ်​တိုက်​​ဆေး​ကြော​ပေးရင်​​ပြောင်​လက်​သွားတယ်​အသားကိုင်​ထားတဲ့လက်​​တွေကိုမကျည်းသီးနဲ့ ​ဆေး​ပေးရင်​ အနံ့ပျောက်​တယ်​တစ်​ချို့က ဆိတ်​သားကို အညှီနံ့ ​ပျောက်​​အောင်​မကျည်း​သီးနဲ့ နှယ်​ပြီး​ဆေးတယ် ​​ကျမတို့လည်း မကျည်း​​ဖျော်​ရည်​ကို​ရအစားထိုး ​သောက်​မယ်​ဆိုအမျိုးသား​တွေ​အတွက်​​ရောအမျိုးသမီး​တွေ အတွက်​​ရော က​လေးလူကြီးပါမကျန်​​သောက်​တဲ့ အကျိုး​ကြောင့်​ဝမ်းတွင်း​အေး​နေမယ်​ကိုယ်​တွင်းအဆိပ်​အ​တောက်​များကိုဝမ်းအဖြစ်​ဖယ်​ရှား​ပေးလို့အပူအစပ်​ကင်းစင်​ပြီးမျက်​နာ​မှာ ထွက်​​နေတဲ့ ဝက်​ခြံ​တွေကိုပါးသထက်​ ပါး​စေမယ်​အမြဲတမ်း​သောက်​​နေလို့ဝက်​ခြံ​တွေ ​အမြစ်ပြတ်​​ပျောက်​သွားမယ် ​​ရောဂါမှန်​သမျှ အပူ​ကြောင့်​ဖြစ်​တာအခုလိုဥပမာ နဲ့​ပြောမယ်​ရေခဲ​သေတ္တာထဲကိုထည့်​ထားတဲ့ အသီးအရွက်​နဲ့အပြင်​မှာထားတဲ့ အသီးအရွက်​လိုဘဲကျမ စမ်းကြည့်​တုန်းကရင်​​အေးတယ်​ဝမ်းမှန်​တယ်​ဆီးမှန်​တယ်​ခံတွင်းရှင်းပြီး …
ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းဖို့ ရေနွေးကြမ်းလေး တစ်ခွက် ကိုယ်ခံစွမ်းအားအတွက် ဂျင်း၊ကြက်သွန်ဖြူ ၊လက်ဖက်ရည်ကြမ်း ဘယ်လိုနှပ်သလဲ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကောင်းဖို့နဲ့ နှင့်ကိုယ်အလေးချိန် ကိုယ်ရည်စစ်သွားဖို့အတွက် သောက်ကြတဲ့ ဆေးဘက်ဝင် ဂျင်း – ကြက်သွန်ဖြူလက်ဖက်ရည်ကို ဘယ်လိုနှပ်ရမလဲ ။ ကိုယ်ခံစွမ်းအား အထူးသဖြင့် အဆုပ်အတွက် ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ဂျင်းတို့ကို ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချနိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်မျိုး အဖြစ်ခြင့်လည်း သောက်ကြတယ်။ ဂျင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကို ရေနွေးကြမ်းလို့ ပြောကြတဲ့ လက်ဘက်ရည်ကြမ်းနဲ့ နှပ်လို့ ရတဲ့ ရှေးနည်းဟောင်းတစ်ခုကို တင်ပြလိုပါတယ်။ Coronavirus ခြိမ်းခြောက်မှုကြီးကြောင့် လူအများစုတို့ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကောင်းဖို့ ဂရုပြုလာကြတယ်။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရောဂါဖြစ်စေသောပိုးများကို ခန္ဓာကိုယ်ခုခံနိုင်သည့် မျှတသောအခြေအနေဟု သတ်မှတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားအတွက် အံ့ဖွယ်အမှုပြုနိုင်သော …
Previous 1 … 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 … 314 Next
This Year : 252310
Total Users : 547443
Total views : 2435377